သေပြီးတာ ကိုးရက်ပဲရှိသေးတဲ့ ကဗျာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » သေပြီးတာ ကိုးရက်ပဲရှိသေးတဲ့ ကဗျာ	4
Posted by Thint Aye Yeik on Oct 31, 2016 in My Dear Diary, Poetry |4comments
”သေပြီးတာ ကိုးရက်ပဲ ရှိသေးတဲ့ကဗျာ”
နေတွေ လတွေထိ ကြွေကျတဲ့အဖြစ်မျိုး. . .
ရိုးတိုးရိတ်တိတ် ပါတယ် တဲ့။
ယုံချင်စရာတောင် မရှိဘူး. . .
သူ့ကဗျာက ထမင်းအနပ်နပ် ငတ်ထားတဲ့ကဗျာတဲ့. . .
ယုံချင်စရာကောင်းနေတာက . . .
သူ့ကဗျာဟာ အာဟာရပြတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ဂရုဏာရသ မြောက်နေတယ်။
”ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က ကဗျာပါ”ရယ်လို့ မကြာခဏ ပြောလေ့ရှိသူတွေကြားမှာ
အဲ့ဒီကဗျာလေးကတော့ . . .
”ကျွန်တော်. . .ကဗျာ မဖြစ်ချင်တော့ဘူး” တဲ့။
အဲ့ဒီကဗျာဟာ. . .
လွှားခနဲ ပိတ်ကားချလိုက်တော့မှ . . .
ပြီးပြည့်စုံသွားမယ့် အနုပညာ ဆိုပါတော့။
အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၆
kai says: ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့.. ၉ရက်အလို..။
ထရမ့်တွေရမယ်..။ ဟီလာရီတွေရမယ်..။ ထရမ့်တွေရမယ်..။ ဟီလာရီတွေရမယ်..။ ထရမ့်တွေရမယ်..။ ဟီလာရီတွေရမယ်..။ With9Days Left Until Election Day, WikiLeaks Is Set to Initiate ‘Phase Three’ of Its Election Coverage
Independent Journal Review‎ –3hours ago
The Wildfire is an opinion platform and any opinions or information put forth by contributors …
Thint Aye Yeik says: ဟီလာရီလေး ကိုးရာဖိုးလောက်
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: အော်..ကဗျာလေးတောင်သေရှာပြီကိုး…ရက်လည်တောင်မမှီလိုက်ဘူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Thint Aye Yeik says: ဖိတ်စာတောင် မဝေဖြစ်ပါဘူးတဲ့